Mari yakawanda yakakwana yedhijimusi muna 2022. Yakanakisisa mari yedhijidha yekuisa mari iyo. Mari yakachengeteka yakawanda yemadhora nekusimudzira kukura uye zvishoma kuderera.
Imwe gumi yepamusoro yemari yedhijitendi yakatendeseka nekusimudzika kwekubudirira kwekubatsira mugore rapera.
Safest digital money
Percentage growth for year
Telcoin (TEL) 1 038 %
FREE Coin (FREE) 188.48 %
Storj (STORJ) 275.72 %
Aeternity (AE) 12.17 %
AnRKey X ($ANRX) 144.78 %
Hifi Finance (MFT) 56.34 %
ExNetwork Token (EXNT) 92.78 %
Marlin (POND) 56.92 %
suterusu (SUTER) 38.57 %
DSLA Protocol (DSLA) 274.84 %
Iyo inonyanya kuvimbika ye digital mari ndeye cryptoratesxe.com webhusaiti webhusaiti, iyo inoratidza iyo yepamusoro mari yemadhora ine yakagadzikana yekuchinjana kwekushandura rate uye yakaderera kusimba.
Iyo webhusaiti yepamhepo "yakatendeseka zvikuru digital mari" inoshandisa zvese zviripo zvakavhurika kubva kune digital mari exchanges uye inoita chiyero cheiyo yakatonyanya kuvimbika mari yemadhora munguva chaiyo.
Iyo yakavimbika digital mari ndeye crypto, iyo kwenguva yakareba inoratidza yakasimba yakagadzikana kukura kwayo. Kugadziriswa mumutengo zvidiki uye kwete kushora. Mari yakadaro, sekutonga, inoratidza diki asi yakagadzikana goho. Njodzi dzekudyara mune akavimbika digital mari ishoma.
A akavimbika digital mari inonyatsokodzera dhizaini yakagadzikana uye yakatendeka
Kusiyana ne "Mari yakawanda yakawanda yedhijitari" sevhisi, iyo inoratidza kugadzikana kweiyo kukura kwakanaka kweiyo digital mari rate, Best dollar mari sevhisi inoratidza mari yemadhora neiyo yakakwira chiyero checrycurrency yenguva yakaongororwa.
Chiyero cheyakanakisa mari yemadhora chiri kuchinja pamhepo, sezvo kutengeserana pane digital mari exchanges kuri kuenderera, uye mwero wecrycurrency unogara uchichinja.
Shandisa iyo "yakavimbika kwazvo crypto" sevhisi pamhepo uye yemahara.
Anonyanya kuvimbika e-mari yemadhora e 2022
Rondedzero yeakavimbika mari yemadhora e $year inoratidzwa nekusarudzwa kwegumi pamadhora ekurongedza kurongeka kubva kune yakatendeseka kusvika kune isinganyatsovimbika, mukuderera kurongeka kwekuvimbika.
Kuvimbika hakuna hune hunhu hwayo, uye kana tichienzanisa neye mari yemadhora, tinoratidza ruzivo sepesenti yehuwandu hwekukura kupfuura gore rapfuura.
Muyero weiyo yakatendeseka yakajeka mari yemadhora inounzwa kwe 2022. Iko kusimba uye purofiti yeiyi mari inogara ichitariswa nebasa redu.
Shanyira webhusaiti yedu uye shandisa sevhisi yepamusoro yepamusoro yakavimbika yeiyo mari yemadhora ye 2022.
Iyo yakachengeteka digital mari ye 2022 ndeye yedu yemahara yepamhepo saiti sevhisi, iyo inoratidza yakachengeteka zvakanyanya, mumaonero edu, mari yemadhora maunogona kuisa mari zvakachengeteka.
Isu tinoongorora chengetedzo ye mari yemadhora nekusimba kana kusimba. Isu tinofunga zvakachengeteka iyo digital mari iyo isingatenderi kudzikisira kwakadzika, kunyangwe kukuvadza kwekusimba kwekuita. Iine yakagadzikana digital mari mwero kuchinjika chati, inofanira kuratidza yakasimba kukura gore rimwe nerimwe kuitira kuti zvivakwa mairi zvinodzorera.
Kusarudzwa kweiyo cryptos yakachengeteka, mitengo yavo uye kusasimba kunoratidzwa kwe 2022. Mutengo uye simba reiyo mari yekuchinjana kwe crypto inogona kuchinja zuva rega rega uye chiyero chedu chepamusoro "Best dollar mari 2022" inochinja mazuva ese.
Mari yemadhora ine kukura kwakagadzikana uye mashoma kusimba.
Mari yemadhora ine kukura kwakagadzikana uye mashoma kusimba ndeimwe yezvinhu zvakavimbika zvekudyara zvinhu.
Iko kukura kwakagadzikana kweiyo crypto kunonakidza mune kuti kune dzakasiyana nguva dzekubika tinogara tichiona purofiti. Kukura kwakasimba kunokurudzira kuisa mari mu crypto kwenguva yakareba uye kusatengesa mari munguva pfupi.
Yakaderera volatility inenge yakafanana nekugadzikana uye inoratidza kuti hazvifadzi kuita mari pane iyo crypto kwenguva pfupi yenguva.
Kwemari pfupi, iwe unofanirwa kutsvaga mari ine huwandu hwakawanda hwekushomeka kuitira kuti ubate huwandu hwepamusoro uye nekutengesa zvakanaka digital mari.
Iyo crypto ine zvishoma kuderera uye yakakwirira kugadzikana yakakodzera kwenguva yakareba yekudyara, pamwe kwemakore akati wandei.
Iyi ndiyo digital mari iyo yatinoratidza mune ino sevhiti yedu saiti.
Tafura yeiyo inonyanya kuvimbika uye yakachengeteka mari yemadhora.
Tafura yeiyo yakatendeseka uye yakachengetedzeka mari yemadhora - zvinoratidzira kuratidza yedu yepamusoro yeyakavimbika yakavimbika mari yemadhora.
Mune iyo tafura yeiyo yakachengeteka crypto iwe unogona kuona zita reiyo crypto currency uye huwandu hwayo hwekuchinjana mumadhora eUS.
Paunodzvanya pane imwe yakatendeseka mari yemadhora iri patafura, iwe unozoendeswa kune peji rine ruzivo rwakadzama pamwero wekutsinhana kwemari iyi.
Chati yeyakavimbika zvikuru uye yakachengeteka mari yemadhora.
Iyo chati yezve yakatendeseka uye yakachengeteka mari yemadhora ndechimwe chipenga chemahara chinoratidza chiyero chepamusoro cheiyo yakavimbika kwazvo mari yemadhora.
Iyo chati yemari yakachengetedzeka zvakanyanya inoratidzira masimba emutengo weiyo yepamusoro 10 cryptos yekuchengetedza kwakanyanya kuchengeteka maererano nefungidziro yedu.